अपार्टमेन्टमा युवती लगेर ‘रासलिला’ गर्ने नेपाली ‘कोब्रा’ नागराजलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा ! – Satyapati
अपार्टमेन्टमा युवती लगेर ‘रासलिला’ गर्ने नेपाली ‘कोब्रा’ नागराजलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा !
काठमाडौं । विभिन्न खेलमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाएर नेपाल र भारतमा सम्पत्ति जोडेको नागराज भनिने नथमल अग्रवाललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।
सट्टेबाजीको नेपाली कोब्रा अग्रवाललाई महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा मंगलबार पेस गरेको छ । संगठित रूपमा नेपालमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाउँदै आएका भारतीय नागरिक अग्रवाललाई गएको साता पानीपोखरीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपिल) तथा अहिले रसियामा जारी विश्वकप फुटबल लगायतका खेलमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाउँदै आएका नागराजलाई नेपाल प्रहरीले तिन बर्षदेखि खोजीको सूचीमा राखेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनको नागरिकता जनकपुरको भएको र नाम नथमल भएको महाशाखाले बताएको छ ।
प्रहरीले खोजिको सूचीमा राखेदेखि नै नागराज कहिले भारतको गोवा, मुम्बई, बैंग्लोर तथा कोलम्बिया, थाईल्याण्ड, अमेरिकामा बसेर नै धन्दा चलाउँदै आएका थिए । उनको सुरुको पार्टनर रमेश अयोग्य, गौरव तिवारी लगायत थिए । तर पैसामा हिसाबकिताब नमिल्दा उनिहरूको पार्टनरसिप टुटेको थियो । अहिले अयोग्य र तिवारीले छुट्टै एकाउण्ट लिएर सट्टेबाजीको धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
गएको आईपीएल क्रिकेटमा सट्टेबाजीमा रकम राख्दा तीन महिनामा रकम तेब्बर हुन्छ र हारेमा रकम फिर्ता हुन्छ भन्दै दुई करोड ४० लाख ठगी गरी नागराज फरार भएका थिए । महाशाखाका अनुसार नागराजले राकेश सिंहलगायतका आधा दर्जन व्यक्तिहरूबाट उक्त परिमाण रकम उठाई फरार थिए ।
उनी गोवाबाट काठमाडौं आएका थिए । नेपालमा व्यापार व्यवसायी केही नभएका नागराजले सट्टेबाजीको धन्दा चलाएकै भरमा २० करोड बराबरको देखिने सम्पत्ती जोडेको जनप्रहारले फेला पारेको छ ।
विभिन्न ठाउँका युवतीलाई जागिर लगाइदिने लगायतका प्रलोभनमा रासलिलामा पनि लिप्त हुने नागराजले महाराजगञ्ज बाँसबारीमा एक रोपनी जग्गामा फैलिएको घर, बालुवाटार प्रधानन्यायधीश क्वार्टर नजिक ८ आना घडेरी, नारायाणथान पार्कभिलेज नजिक तीन रोपनी जग्गा र पानीपोखरीको अपार्टमेन्टको आजको दिनको बिक्री मूल्य २० करोड बराबरको हुन आउँछ । तीन साता अगाडी सट्टेबाजीको आरोपमा नागराजका केही सदस्यलाई काठमाडौं परिसरले पक्राउ गरेको थियो ।